Indawo yokuhlala ebanzi yeLakefront Log yasekhaya - I-Airbnb
Indawo yokuhlala ebanzi yeLakefront Log yasekhaya
Ikhabhinethi yethu iseGreers Ferry Lake. Yipropathi yekhabhinethi yelog ephambi kwechibi!
Uya kuyithanda ikhabhinethi yethu ngenxa yokukhululeka, amagumbi okuhlambela/ikhitshi/indawo yokuhlamba impahla, iibhedi ezitofotofo, amava okwenene asekhaya kunye nokufikelela lula kwamanzi alungele ukuqubha, ukuloba, okanye ukuhlala emthunzini. Uya kuwuthanda umngxuma obanzi ongafane ufunyanwe kwiipropathi eziphambi kwechibi. Ikhabhinethi yethu ilungele izibini, iintsapho, amaqela amakhulu, abahlobo, kunye nabahlobo abanoboya (izilwanyana zasekhaya).
Indawo entle yokuhlala ephambi kolwandle. Eli khaya ligqibelele ngandlela zonke; uya konwatyiswa ziinkumbulo oza kuzenza ngexesha lokuhlala kwakho. Indawo yokuzimela yothando kwimpelaveki, iholide yosapho kunye nabantwana, okanye neqela labahlobo. Indawo epholileyo, efudumeleyo kunye nesezantsi emhlabeni enezinto ezongezelelweyo ezenza ukubaleka kwakho kugqibelele.
>>>3 BR/2 BA. Ukulala 10. 1,800 square feet.
IHLAZIYWA ENTSHA ngo-2017!
Kutshanje sigqibe uhlaziyo lwethu ngebhedi enkulu yenkosi kwigumbi lokulala elikhulu elinebhedi entsha kunye namashiti, ibhedi entsha yekumkanikazi kunye namashiti amatsha kunye nebhedi kwigumbi elinye leendwendwe, iiTV zescreen ezitsha ze-LED kwigumbi lokulala kunye negumbi lokulala elikhulu, isofa entsha yokulala. kunye necandelo elitsha emhadini, iitawuli ezintsha kumagumbi okuhlambela, ioveni entsha yetoasta kunye nomenzi wekofu ekhitshini, kunye neembiza neepani ezintsha kunye nezinto ezintsha zesilivere. Sikwanayo negrisi entsha yerhasi phantsi kwendawo egqunyiweyo yedesika. KUNYE, sibeka ikhaphethi entsha kumagumbi okulala kunye nomgangatho omtsha kwindawo yokuhlambela enkulu!
Siyazi ukuba zonke ezi zihlaziyo ziya kwenza ukuhlala kwakho kube mnandi kakhulu.
>>>Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ukulungiselela isidlo sosapho okanye ukonwabisa. Ikhitshi eligcweleyo, iholo enkulu, indawo yomlilo, kunye negumbi lokuhlala elahlukileyo. Ikhitshi ineefriji ezimbini ezipheleleyo, ii-oveni ezimbini, isitovu esiphezulu sokupheka esigudileyo, umatshini wokuhlamba izitya, wokulahla, i-oveni yetoaster, umenzi wekofu, iblender kunye nezixhobo zokupheka. I-den inkulu kwaye inendawo eninzi yomntu wonke. Inendawo yokuhlala esecaleni kweefestile ezijonge echibini kunye nenye indawo yokuhlala ejikeleze indawo yomlilo. Igumbi lokulala elikhulu kakhulu linebhedi enkulu, yakhe kunye negumbi lakhe lokulala kunye nefestile ephindwe kabini phezu kwendawo eluhlaza kunye nechibi. Igumbi lokulala leNdwendwe linebhedi enkulu, igumbi lokulala elipheleleyo, kunye nefestile. Igumbi le-Bunk lineseti ezimbini zeebhedi zeplanga eziqinileyo, igumbi lokulala elipheleleyo, kunye nefestile. Igumbi lokuhlambela eligcweleyo elineshawa/i-tub combo ibekwe epasejini ecaleni kwegumbi lokulala leNdwendwe kunye negumbi leBunk.
>>> Indawo yokuhlamba enewasha kunye nesomisi esipheleleyo, iayini, kunye nebhodi yoku-ayina.
>>>Inkonzo yeTV yesathelayithi ethe ngqo! Umdlali wedvd! Imidlalo yebhodi kunye neencwadi nazo zibonelelwe ukuba uzonwabele. Ukuphumla ngokupheleleyo.
>>>Idesika enkulu yokusonga igqunywe ngokuyinxenye. I-Gas Grill kumgangatho.
>>>Icocekile kwaye intle ngaphakathi nangaphandle!
>>> Indawo enkulu yokupaka ilori yakho kunye nesikhephe esirhuqwayo!
>>>Yazisa isikhephe sakho simahla eCherokee Recreation Area okanye eShiloh Park, kwiDevils Fork Recreation Area, okanye kwiNarrows Park. Kufutshane kakhulu neShilo Marina kunye neLacey's Narrows Marina. Ungatsala ukuya elunxwemeni phambi kwendlu ukuze ulayishe lula kwaye ukhulule. Unxweme oluphambi kwendlu yindawo entle yokuqubha, ukudada kwisihlenga, ukubheqa/intlanzi ejikeleze i-kayak okanye iphenyane, okanye uhlale phantsi komthi odumileyo (ok, awudumanga, kodwa upholile) amanzi. Ungaloba echibini phambi kwekhabhathi okanye ubuyele eBudd Creek ukuze ulobe kakuhle. I-cove yethu ikwayindawo entle yokufundisa abantwana indlela yokutyibiliza emanzini. Le ndlu ibekwe kwindawo engasese kufutshane nebhayi enkulu yechibi.
Yiza nokutya okuninzi ukuze ugcobe kumgangatho okanye uye kwenye yeendawo zokutyela ezininzi ezilungileyo ezikufutshane.
Nceda uze ube lundwendwe lwethu kwaye uphumle kwaye uzonwabele!
4.91 · Izimvo eziyi-96
Indawo yethu yokuhlala ebanzi ye-log cabin ibekwe kwisitalato esifileyo esingenazo izakhiwo kwelinye icala lesitrato. Inika indawo yokuhlala efihlakeleyo, ethe cwaka ngaphandle kwetrafikhi.
Ndiya kufumaneka ngefowuni okanye isicatshulwa ngexesha lokuhlala kwakho kwiimeko ezingxamisekileyo kunye nayo nayiphi na imiba enzulu evela kum. Ndikwanaye nomphathi wepropathi esitratweni onokuncedisa.